पहिलो डोज खोप लगाएकाहरूको आतुरी : महिनौँ बितिसक्यो, दोस्रो डोज पाइएन - जे देख्छ, त्यही लेख्छ
चिकित्सक भन्छन्–पहिलो र दोस्रो डोजको समयान्तर ठूलो नबनाउँदा अति उत्तम
मोरङको सुन्दरहरैँचा–१० की ८१ वर्षीया विनता तिमल्सिनाले कोरोना भाइरसविरुद्धको पहिलो डोजको खोप लगाएको तीन महिना बित्यो । उनले गत वर्षको फागुन २७ गते विराटचोकस्थित ईन्द्रपुर स्वास्थ्यचौकी पुगेर कोभिड शिल्ड खोप लगाएकी थिइन् ।
उनले पहिलो मात्राको खोप लगाएको तीन महिना बितेको छ । तर तीन महिना बितिसक्दा पनि उनले दोस्रो डोजको खोप पाएकी छैनन् । दोस्रो डोजको खोप लगाउन ढिला भइसकेको भन्दै उनी चाँडै नै नगरपालिकाले दोस्रो डोजको खोप लगाउन बोलाउनेमा विश्वस्त छिन् ।
‘खै खोप लगाउँदा त अझै केही समय बाँचिन्छ होला भन्ठानेर पहिलो मात्राको खोप लगाएँ तर दोस्रो डोजको खोप नलगाए प्रभावकारी नै हुँदैन भन्ने सुनेकी छु’, उनले भनिन्, ‘चाँडै बोलाउलान् भन्ने अपेक्षा छ । दोस्रो डोजको खोप लगाउन आतुर छु ।’
मोरङको सुन्दरहरैँचा–१० की ८१ वर्षीया विनता तिमल्सिनाले पाएको खोप कार्ड ।
यस्तै आतुरी छ, सोही स्थानका ७८ वर्षीय बमबहादुर बस्नेत र ७४ वषीर्या उनकी श्रीमती कृष्णमाया बस्नेतको पनि । उनीहरूले पनि दोस्रो डोजको खोप लगाउन नपाएको तीन महिना बितिसकेको छ । फागुन २७ गते नै पहिलो डोजको खोप लगाएका बस्नेत दम्पत्ति दोस्रो डोजको तीव्र प्रतीक्षामा छन् । उनीहरू दोस्रो डोजको पनि खोप लगाउन पाए केही समय बाचिन्थ्यो कि ! भन्ने भनाइ जाहेर गर्छन् ।
खोप कार्ड देखाउँदै विनता तिमल्सिना
‘खै दोस्रो डोजको खोप लगाउन बोलाउनै आँटेनन्’, दुवैको एकै स्वर छ, ‘खोप लगाएका मानिसलाई कोरोनाले सिकिस्तै बनाउन सक्दैन रे । यस्तै सुनेर डराइ–डराइ खोप लगाएका थियौँ ।’ सोही स्थानका ८१ वर्षीया सूर्यप्रसाद ढकाल दम्पत्ति पनि दोस्रो डोजको खोप पाउन ढिलाइ भएको भन्दै गुनासो पोख्छन् ।
यता, सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाका कोभिड–१९ फोकल पर्सन अर्जुन भट्टराई दोस्रो डोजको भ्याक्सिनका लागि जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेको बताउँछन् । स्वास्थ्य कार्यालयबाट त्योअनुरुपको परिपत्र नआएका कारण फेरि पनि यो विषयमा फलोअप गर्ने उनको भनाइ छ ।
७८ वर्षीय बमबहादुर बस्नेत
‘हामीले दोस्रो डोजको खोपका लागि पहल गरिरहेका छौँ’, उनले भने, ‘तीन महिनामै प्रभावकारिता घटिहाल्दैन, यसैले डराउनु पर्ने अवस्था छैन । त्यै पनि स्वास्थ्य कार्यालयसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । त्यहाँबाट खोप पाएपछि लगाउन थालिहाल्छौँ ।’ सुन्दरहरैँचा नगरपालिकाले १३ सय वृद्ध–वृद्धालाई खोप लगाइसकेको उनले जानकारी दिए ।
पहिलो र दोस्रो डोजको समयान्तर ठूलो नबनाउँदा अति उत्तम
जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर नवराज सुब्बा ।
दोस्रो डोजको खोप लगाउन नपाएर छटपटाइरहेकालाई जनस्वास्थ्य विशेषज्ञ डाक्टर नवराज सुब्बाले भने नआत्तिन सुझाव दिएका छन् । तीन महिनामै खोपको प्रभावकारिता नघट्दै बताउँदै डा. सुब्बाले भने, ‘पहिलो डोज र दोस्रो डोजको समयान्तर ठूलो नबनाउँदा अति उत्तम हो ।
तर खोपका लागि अरू देशमा निर्भर रहनुपर्ने हाम्रोजस्तो देशका लागि भने समयान्तरले फरक पारिरहेको छैन । पहिलो तीन साताको मात्र समयान्तर राखिएको थियो । अहिले नयाँ–नयाँ अनुसन्धानले फरक–फरक नतिजा निकालिरहेको अवस्था छ ।’
कोभिड शिल्डको खोप ६ महिनासम्मको अवधिमा पनि लगाउन सकिने डा. सुब्बाको भनाइ छ । खोपमा आश्रित हुनुपरेका कारण प्रभावकारितामा पनि कमी आउने पो हो कि भन्ने आशङ्का डा. सुब्बाको छ । उनी भन्छन्, ‘सरकारले जसो–तसो व्यवस्था गरिरहेको छ । अरूमा निर्भर रहनु परेपछि त्यहाँबाट कहिले आउने र लगाउन पाउने हो । प्रतीक्षामा लामो समय बित्न सक्छ । यसैले अब जतिसक्दो भ्याक्सिन व्यवस्थापनमै सरकारले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ ।’
यस्तै, कोसी अस्पतालका सिनियर फिजिसियन डाक्टर दीपक सिग्देल कोरोनाको दुवै डोजको खोप लगाउँदा सङ्क्रमित गम्भीर अवस्थामा पुग्ने सम्भावना कम हुने बताउँछन् । खोप प्रभावकारी रहेको बताउँदै सिग्देलले चाँडै नै स्थानीय सरकारसँगको समन्वयमा खोप लगाउन आग्रह गर्छन् ।
‘म आफैँले पनि दुवै डोजको खोप लगाएको छु’, उनले भने, ‘दुवै डोजको खोप लगाउनेलाई पनि सङ्क्रमण हुन सक्छ । तर खोप लगाएका सङ्क्रमितलाई कोरोनाले सिकिस्त बनाउने सम्भावना कम हुन्छ ।’
अन्तिम पटक अध्यावधिक गरिएको: बिहीबार, जेठ २७ २०७८ १५:३३:१८
लकडाउनको मार, थन्काइएका अटोरिक्सा हेरेर दिन बिताउँदै चालकहरू